What is the ADB & Fastboot? ADB နဲ့ Fastboot ဆိုတာဘာလဲ... - Min Oaker
ဗဟုသုတ What is the ADB & Fastboot? ADB နဲ့ Fastboot ဆိုတာဘာလဲ...
What is the ADB & Fastboot? ADB နဲ့ Fastboot ဆိုတာဘာလဲ...
by HAK Mobile on 7:24 AM in ဗဟုသုတ
ဒီ post ​လေးကို ကို​ဇော်​သွင်​ စီကမှ ပြန်​share ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​
What is the ADB & Fastboot?
ADB နဲ့ Fastboot ဆိုတာဘာလဲ...
တစ်﻿ချို့ဖုန်း Service သမား﻿တွေ ADB နဲ့
Fastboot အ﻿ကြောင်း﻿ကို﻿တောင်﻿ ﻿ကောင်း
﻿ကောင်းနားမလည်﻿ပဲ Service လုပ်﻿﻿နေတဲ့
သူတို့သိတာက Software, Hardware,
ပါ. အခု﻿ရေးမှာက အဲ့ဒီ့ဆရာကြီး﻿တွေ﻿ရော
နည်းပညာ (သို့) ဖုန်းအ﻿ကြောင်း﻿လေ့လာ﻿နေ
သူများ အားလုံးအတွက်﻿ ကို လိုရင်းတိုရှင်း
သ﻿လောက်﻿ ﻿ရေးသား﻿ပေးလိုက်﻿ပါတယ်﻿. . . .
﻿အောက်﻿မှာ﻿လေ့လာပါခင်﻿ဗျာ. . . .
✯ ADB ✯
ADB ရဲ့ နာမည်အရှည်ကတော့ Android Debug Bridge ဖြစ်ပါတယ်။ADB ဆိုတာက Android ဖုန်းတွေမှာ ခိုင်းလို့ရတဲ့ Tool Kit ဖြစ်ပြီး Computer ကနေ ဖုန်းကို ချိတ်ဆက်ပြီး ခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Phone မှာ USB Debugging ဆိုတဲ့ဟာကို ဖွင့်ထားမှ Computer ကနေ Phone ကို ADB Tool Kit နဲ့ ခိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အ﻿ရေးပါအ﻿ရာ﻿ရောက်﻿ပါတယ်﻿. . . .
မိမိဖုန်းမှာ Pattan lock တို့ ဘာLock တို့
ပြန်﻿မမှတ်﻿မိ﻿တော့တဲ့အချိန်﻿မှာ ဒီ USB Debugging သာမOn ခဲ့မိပါက ﻿တော်﻿﻿တော်﻿
နဲ့ Lock ပြန်﻿ဖွင့်﻿နိူင်﻿မှာ မဟုတ်﻿ပါဘူး။
တာနဲ့က ADB Driver မသိလို့ပဲဖြစ်﻿ပါတယ်﻿
ADB ဆိုတာ Command Line ကနေ
ခိုင်းရတာ Tool Kit တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Command မှာ သူ့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Code တွေကို ရိုက်ပြီး ဖုန်းကိုခိုင်းရမှာပါ။သူ့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Code တွေကို ရိုက်ပြီးတော့ ဖုန်းကို မြန်မာဖောင့်ထည့်တာ၊Application တွေထည့်တာ၊Root လုပ်တာ၊Recovery ထည့်တာ၊ Fastboot Mode ကိုဝင်တာ၊ Partition တွေကိုကြည့်တာRecovery Mode ကိုဝင်တာ၊Factory Reset ချတာ၊Computer ကနေ ဖုန်းထဲကို File တွေ သွင်းတာ၊ဖုန်းထဲကနေ Computer ထဲကို File တွေ ဆွဲထုတ်တာ၊Device သိမသိစစ်တာ၊Device Root ရှိမရှိစစ်
✯ Fastboot ✯
ဖုန်းအများစုမှာတော့ Fastboot ကို Volume Down + Power ကို နှိပ်ခေါ်ရတာများပါတယ်...သူကနေ Recovery ကို Flash တာ၊Recovery ကိုဖျက်တာ၊Boot ကို Flash တာ၊Boot ကို ဖျက်တာ၊System ကို Flash တာ၊System ကိုဖျက်တာ၊Reboot လုပ်တာတို့ အများ
အဲ့ဒါအပြင် Command Line bat file တွေပါရေးလို့ရပါသေးတယ်
By HAK Mobile at 7:24 AM